Indonesia in Focus: Booqo Adduunka jannada
Booqo Adduunka jannada
Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (372)
(Qaybta saddex boqol iyo laba iyo toddobaatan), Depok, West Java, Indonnesia, 17 September 2015, 19:42 pm).
Ilaaha yaa abuuray oo dhan u khuduuca iyo caalamka oo dhan, marka ay dadku doonayaan in ay tagaan samada Aakhiro (waari) haddaba aynu fuliyo safaro ugu fiican in ay tagaan Xajka / Cumrada in Mecca, Saudi Arabia.
Si kastaba ha ahaatee, ereyga Eebe Quraanka, inkastoo aadanuhu waxaa looga baahan yahay in ay mudnaanta bixinta nolosha Aakhiro, si ay u hirgeliyaan si joogto ah tiirarka Islaamka, laakiin ninka sida kukala xikun xaqa dhulka ha iloobin ay nolosha adduunka (inkasta oo marar dhif ah in ka badan 100 sanno).
Oo quruun Indonesian waa in mahdiya Eebe abuure, oo hide kala duwan ee jasiiradda qurux badan oo la deggan yihiin in ka badan 100 jinsiyadda, midabka, luqadda, waxaa Jafaaniis, Suudaaniis, Papua, Aceh, oo berrin bannaan, Dayak iyo Bugis, oo ay deggan yihiin dadka diin duwan, Islaamka (80 boqolkiiba) tirada guud ee lacag dhan 250 million, inta kale waa Catholic, Protestant, Hindu, Buddhist, Hindu Kaharingan (Dayak Kalimantan), si Kong Fu Tse.
Dhammaantood way wada noolaadaan nabad iyo is ixtiraam la geesood ah oo ku kala duwan diinta, midabka, qowmiyad, iyo luqadda, iyo mahad dhaqankooda.
Sidaa darteed, Indonesia booqo qurux badan oo hodan ku khayraadka dabiiciga ah taas oo weli ku jira oo bikrad ah, dhaqan casri ah taabanin (Western).
Haddii aad soo booqday Indonesia ka dibna aad Ilaah siiyey, naxariistiisu in Caalamka mahad doonaa.
Halkan waxaa ku qoran liiska meelaha dalxiiska ee Indonesia by gobolka, il Wikipedia
MedanIstana magaalada Maimoon
Great Masjidka Medaan
Tjong A Ufbaa on JL. Gen. Ahmad Yani (Kesawan).
The dhismaha jirka City Hall
Biyaha Tower Medaan (taas oo ah icon ah oo magaalada ka mid ah Medaan)
Laadaan la Titi (biriijka laga dul jidadka tareemada ah)
Dhismaha London Sumatra
Xafiiska Medaan Post
BharatAir Pakpak dhac UNE Lae
Dhac Lae Singgabit
Deli Serdang Green Hill City
Dhac Laba Colors
cad Sampuran sua dalka
Mikie Holiday (miciinka la xarunta theme park)
Tongging tuulada (sidoo kale loo yaqaan Tambusan Tuulada)
Deleng Sibuaten (tuulada Lingga Desa Naga Brand)
Beero Shaaha Sidamanik
Protected Forest AEK Nauli
Dawladda Hoose Pematangsiantar
Quan Buddhist macbudyo im
Skip Nias dhagaxyada
Sitti buundo Nurbaya
Pasia xeebta Jambak
Sikuai xeebaha jasiiradda.
Study Koto Gadang
Masaajidka Jamik Parabek
Taluak Jamik London Masaajidka
Dhashay Museum Bung Hatta
Museum Tri Daya Dharma Eka
Godad Japan Bukittinggi
Meelaha Duur-joogta iyo Dhaqanka Kinantan
Mashearulxaraam ee Askariga Lama yaqaan
Lake Tarusan Kamang
Dhashay Museum Buya Hamka
Golaha Dhaqanka Fadli Zon
Degmada Konton iyo City
Goa Ngalau Beautiful
Dhismaha Indo Jolito
Panorama Tabek jaban
Warqadaha iyo Information Centre of Dhaqanka Minangkabau
House Tower Kampai Nan Panjang
Lake Kor iyo Hoos Lake
Buunshihii kun Hard Water
Shaaha leexsan Alahan Panjang
South Degmada Xeebta
Niagara hooskii Sani
Peak Langkisau in Painan (magaalada)
Royal Palace Mala'igtu Indrapura
Cultural Center Building Sawahlunto
Tareenka Museum Sawahlunto
Kandi Duur-Park (Zoo Sawahlunto)
Sijunjung iyo Dharmasastra
Ngalau Beautiful Aie Angek Sijunjung
Fiidmeerta buuraha lahaa Aie Angek Sijunjung
Padang macbudka Raco Dharmasastra
Pamalayu raad duulaan (meesha la dul saarin of Arca Amogsaphasa) Dharmasraya
Marinka iskaga caabido
Soddon Hill National Park
Giam Siak Kecil Biosphere Reserve Bukit dhagax
Saldanada Palace Palalawan
Dhulbaraha mashearulxaraam Pangkalan Kuras
Saldanada Palace Indragiri
Water Resources Pawan
Qalcaddayda Todoba lakabka
Selatbaru xeebta Bengkalis
Xeebta North Rupat
Great Masjidka An-Nur Pekanbaru
Qaniino Masjid Sultan Riau Island
Island uu qaniino
State Museum Jambi
Beerta shaaha Kayu Aro
Todoba Lakes Mountain
Lake Ulak Lee'ah
Cape Xeebta Suuradwacnaantu
Xeebta caleenta Stone
Xeebta ee Cape ru Sadai, South Bangka
Kerasak Cape xeebaha, South Bangka
Buur xeebta Namak, South Bangka
Xeebta ee Cape Pendam
Xeebta Bukit Batu
National Museum "Maroodiga"
'45 Building Joang
Qubeyska waxa Cipanas
Maqaarka xarumaha Sukaregang
Xarumaha texeen, xariirta ah
Bohol Talaga bodooyinka
Xurmaysan xabaashii Godog
AHN Botanical Gardens
Tahura Ciir H Juanda
Dalxiiska Village Jelat
Edge marmarka Sukabumi
Great Masjidka Cirebon
Red Masaajidka Panjunan
Qabriga Complex iyo xabaashii sunankiisa Gunung Jati spreaders madaxda Islaamka ee Cirebon
UJEEDDO Dalxiiska waxa xiligeeda Belawa
Great Masaajidka Source
Beero Shaaha Cipasung
Dabaasha / Balong Sangraja
Fulitaanka Buur Ceremai
Waxaa Sangiang (sunankiisa Parung)
Bartamaha Java Grand Mosque
Qubo Ocean Park
Xeebta Portuguese qalcadaha
Jasiiradaha Karimun iyo rucubo
Tirto xeebta Samodra
Professor xeebta Rancak
Guamanik xeebta Pecatu
Dead xeebta hirarka
Niagara dooxada Nganten
Belik Angel iyo Jake Tarub
Million balliyada Root
Godka ku Manik
Museum of World Peace xilkan
Mandheerta taallo R.A Kartini
Gapura Jami 'Baiturrohman I
Great Masaajidka Baitul Makmur Jepara
Temple Hian Thian Siang Tee
Siti Inggil madaxtooyada Kalinyamat
Tiara Park Waterboom iyo 3D Tiyaatarka
Sabayn Market Demaan
Suuqa Karangrandu (fudud dhaqanka suuqa Jepara)
Suuqa Ngabul (suuqa Durian)
Jepara Ganacsiga iyo Dalxiiska Center
Xarunta Shopping Jepara (S.C.J)
Menara Kudus Masaajidka
Saddex dhadhan Biyaha Rejenu
Tugu Quduuska Aqoonsiga
The Fiinta View Waterboom
Dabbaasha iyo honocoroko Fishing
Great Masjidka Demak
Agro Dalxiiska Mlatiharjo
Xoola-Dalxiiska Image rummaanka Mranak
Mangrove Forest Dalxiiska
Gorayo Taranka (Tyto Alba), Guntur
Pikatan Biyaha Park
Kledung Pass Nasashada Area
Tambi agrotourism - degmo. Kejajar
Agrotourism Tanjungsari - degmo. Sapuran
Agrotourism Bedakah - degmada Kertek
Menjer Lake - degmo. Garung
Telaga Warna - degmo. Kejajajr
Niagara SiKarim - degmo. Watumalang
Curug Winong - degmo. Selomerto
Bad Kalianget iyo Mangli - degmo. Wonosobo
Kaydka Wadaslintang - degmo. Wadaslintang
Xabaalo Buddhist - degmada Mlipak. Wonosobo
Beero Salak - degmo. Sukoharjo
Xarumaha Craft - degmo. Sapuran
Grobogan [edit | edit il]
Ololka weligeed ah (Mrapen)
Biyaha Park Thistle
Qubeyska waxa Moga
Losari Coffee leexsan
Babadan (Relay Pandang / Merapi fiirsasho Post)
Selomoyo (dalcadaha muuqaalka dabiiciga ah ee Mount dillaacay)
Taman Kyai joogtada
Dad Beach / Coast Logending
Godka ku Petruk
Fort Van Der Allain
Saka Masaajidka Single
Hadaas Shaaha Gardens
Sapta bad Tirta
Golaha Dana Hadi (Dana Hadi Batik Museum)
Solo Daad Center [PGS]
Xarunta Ganacsiga Beteng [BTC]
Diirran Biyaha Qubeyska Langenharjo
Pandawa World Water
Sugar Factory New Gondang
Taman Dayu (Dayu Park / Taman Dayu Alam Casrigaan)
Digada kaydka Ombo
Girimanik ama Niagara Setren
Forest Dalxiiska Ketu
Prambanan macbudka adag
Happy Loka Zoo
Yogya Kembali mashearulxaraam
Dalxiiska Village Ketingan
Dalxiiska Village Kembangarum
Xeebta New Pandansimo
Grand Castle Biyaha Park
Simbah xabaashii ee Kyai Krapyak Tsani
Qabriga Nyi Ageng Serang
Ludruk Habsami Dhaqanka
Buundada ugu dheer
Buur Bromo iyo Semeru.
Race Bull in Sumenep, Madura
Cafe gumitir Nasashada Area
Agro Dalxiiska Mumbul Garden
Qubeyska iyo Nature Patemon
Qubeyska waxa gariir Sibutong
Qubeyska waxa Pontang
Qubeyska waxa Kebon Agung
Nature iyo Bath Botanical Gardens
Travel Kucur iyo Kampung Nelayan Beach Puger
Nature iyo Qubeyska Rembangan Resort
Boom Biyaha Niagara
Sigarka soo saaridda Bobbin Crutu
Paintai Bandealit iyo Betiri Meru National Park - Jember
City Surabaya [edit | edit il]
Bentoel History Museum - Malang
Sempu Island - South Malang
Xeebta Ngliyep - South Malang
Kota dhagax [edit | edit il]
Batu Secret Zoo - dhagax weyn
Duur-joogta Museum - Stone
Bariga Java Park - Stone
Batu Night cajiib ah (BNS) - Stone
Selecta Madadaalada Park - Stone
Agro Kusuma - Stone
Kooxda Ubaxa - Stone
Travel qaado tufaax - Stone
Dalxiiska Village - Stone
Gaadiidka Museum - Stone
Xeebta Lombang - Sumenep
Xeebta Slopeng - Sumenep
City oo ka mid ah degmada Kediri
Mashearulxaraam Simpang Lima Gumul
Masaajid weyn Kediri
Square-iska xiirtaa oo degmada Kediri
Xarunta qadiin Ogow pong
Temple surowono - xiirtaa
Gumul Jannada Island
Kelud buurta dalxiiska
Dhoho kediri wadooyinka magaalada
Xeebta Karanggongso - Terri
Xeebta Prigi - Terri
Xeebta Blado - Terri
Xeebta Pelang - Terri
Magaalooyinka iyo Blitar 
Makam Jakarta - Blitar
Xeebta weerarkii - Panggungrejo - Blitar
Macbudka Casriyaynta - Nglegok - Blitar
Xeebta Tambakrejo - Tambakrejo - Blitar
Temple Simping - Sumberjati - Blitar
Qabriga Aryo Blitar - Blitar
Temple Sawentar - Garum - Blitar
Xeebta Jolosutro Wates - Blitar
Timaha Dalxiiska Monte Gandusari - Blitar
Goa Embultuk Rinkeby - Blitar
PETA taallo Blitar
Source Udel Blitar
Dabiiciga ah kulul Qubeyska Songgoriti
Qubeyska waxa kulul Cangar
Buur Ijen - Banyuwangi
Bay Blue - Muncar
City of Pasuruan
Buur digger Temple
Magaalada Lumajang yaqaan degmada Lumajang waa degmo ku taal bariga Java taas oo uu leeyahay jiidashada cajiib ah dabiiciga ah. In ka badan 65 jiidashada in 21 goobood. Waxaad ku raaxaysan karaan quruxda dabiiciga ah ee dabiiciga ah
Xeebta Popoh - Tulungagung
DHACDO NAXDIN LEH Niagara Bodo - Pandaan, Pasuruan
Marine Dalxiiska Lamongan - Lamongan
Maharani Zoo iyo Goa - Lamongan
Gresik [edit | edit il]
Bali [edit | edit il]
Xeebta Kuta galabtii.
Pura Tanah Luudh
Lombok [edit | edit il]
Dhac Spring qoortuna
Buur Rinjani National Park
West Kalimantan [edit | edit il]
State Museum of West Kalimantan
Dara Museum Juanti Sintang
Pontianak Saldanada Palace Kadariah
Foreman Qabriga Juang
Siinka dheer Island Park
Xeebta ee belandang Cape
Dalladaha xeebta Stone
Merasap Waterfalls Cascade
Jemelak u gudubno, iyo Kebiau
Forest Dalxiiska Baning
National Parks Bukit Baka Bukit Raya
National Park Mountain xabaal
Maya Islands Nature Reserve Karimata
South Kalimantan [edit | edit il]
! Article ugu weyn ee this category waa liiska meelo dalxiiska ee South Kalimantan.
Sabayn Market Muara Kuin
Sabayn Market Muara Kuin (Banjarmasin)
Sabayn Market Lok Baintan (Banjar)
Museum Mangkurat (Banjarbaru)
Museum Wasaka (Banjarmasin)
Ubaxa Island (Banjarmasin)
Island uga naxday
Sultan Masaajidka Suriansyah (Banjarmasin)
Dhismahaan ayaa xabaashii Suldaan Suriansyah (Banjarmasin)
Pangeran Antasari Qabriga Complex (Banjarmasin)
Xeebta Takisung (Tanah Laut)
Xeebta Batakan (Tanah Laut)
Lok Games (KabupatenHulu Dhexe River)
Xeebta Swarangan (District badda Land)
Xeebta Pagatan (KabupatenTanah xawaash)
Buur Kayanga (Tanah Laut)
Great Temple Amuntai (Hulu Sungai Utara)
Dub Lake (Hulu Sungai Utara)
South Sulawesi [edit | edit il]
Xeebta Tanjung Bira
Leang Leang Prehistory Park
Ban hiin Kiong Temple
Ubaxa City of Tomohon
Kendari [edit | edit il]
Pantai Batu xilkan
Museum of koonfur Sulawesi
Muna [edit | edit il]
Ciidanka Booliisku Heritage Site Liang Kobori iyo Metanduno
Muna Old City Masaajidka
Qalcaddayda City Tiworo
Qalcaddayda City Lambiku
Gloves xarumaha Muna
Wakatobi [edit | edit il]
North Konawe [edit | edit il]
Beach Tanjung Taipa
Source Air Wolasea kulaylka
Telaga Saddex Colors
Konsel [edit | edit il]
Qoyan National Park Aopa Watumohai
Bau-Bau [edit | edit il]
Madaxtooyada qalcaddayda Buton
Madaxtooyada qalcaddayda Palace * Malige
Central Sulawesi [edit | edit il]
Cammuudda Paleleh White
Diyaarso dhagaxyo, Lakea xeebta
Aamminsan yihiin Lindu National Park
Gorontalo [edit | edit il]
Nani taallo Wartabone
Church Banda Neira
Tuulada Cultural Banda Ely
Papua [edit | edit il]
Dalxiiska ee Bali
Soojiidashada & Points Points oo xiiso Bali
Waxa aan shaki ku jirin in Bali ayaa noocyo kala duwan oo soo jiidashada deegaanka oo ay ku jiraan xeebaha, buuraha, iyo beerahooda, iyo xitaa tuulooyinka iyo dadka deegaanka ay la dhaqan u gaar ah oo kala, meelaha taariikhiga ah oo leh Mystique ah in uu yahay qaro weyn oo dabcan quruxda dabiiciga ah oo la captivating. Dalxiisayaal Dibadda inta badan wac Bali sidii dalkii Ilaah ama dhulka ilaahyada.
Halkan waxaa ku qoran liiska qaar ka mid ah meelaha laga yaabaa in aad soo booqato inta aad jasiiradda:
Dalxiiska waxaa ku yaalla magaalada bariga Denpasar. Xeebta Sanur loogu raaxaysan karaa madow ee cammuudda xeebta iyo caddaan. Xeebta Sanur waxaa la samayn karaa in hawlaha watersport u xiiseeya isboortiga biyaha.
Xeebta Sanur ayaa sidoo kale si fiican u yaqaan meel aynu ku raaxaysan karaan aragtida qorrax ka soo baxa jasiiradda of Bali / Sunrise Beach. Faahfaahin dheeraad ah ..
Xeebta Sanur waa mid xasilloon inta badan lagu tilmaamo inuu yahay kaalinta dalxiis ah oo uu soo da'doodu tahay 50 sano iyo in ka badan. Waayo, kuwa idinka mid ah kuwaas oo raadinaya xasilloonida, qurux dabiici ah iyo dhaqanka halka faintly maqlaan music dhaqanka ee Bali, waa halkan.
Ubud waa mid aad loo jecel yahay oo la farshaxanka maxaliga ah, sababtoo ah waa meel ay wax ku bartaan si ay qoob ka ciyaarka, rinjiyeynta, qoryo farshaxan ama dhagax. Ugu goobta waxaa jira meelo lagu daawado farshaxanka badan ee ay dalxiisayaashu ku iman kartaa in ay ku dhaqmaan sida Balinese play ah alaabtii muusikada iyo qoob ka ciyaarka ee Bali. Ubud ayaa sidoo kale caan ku tahay muuqaalka dabiiciga ah oo qurux badan la beero bariis saf ah ama loo yaqaan Subak.
Qaar ka mid ah soo jiidashada ka jira degaanka ee Ubud, iyo kuwo kale; Goa Gajah, Gunung Kawi, Kehen macbudka, Tirta Empul Qubeyska, IWM Eeg indhaha ee Ubud dheeraad ah oo buuxda.
Just drive ah 15-daqiiqo ka Kuta, Seminyak waa mid ka mid ah meelaha loo dalxiiso ee Bali waa arrin caan ah oo maanta oo guri ka mid ah noocyada kala duwan ee hotels, filooyin, maqaayadaha iyo HBS raaxo caalamka ah. Seminyak sidoo kale aad si fudud u heli karaan yaalaaan iyo xarunta ganacsiga Julius Karangi ayaa Bali.
Jawiga Seminyak laftiisa waa mid yara xasilloon marka loo eego Kuta, safra inta badan waqti badan la qaato lagu Raaxaysto oo xeebta, ku raaxaysan goobaha HBS ama dejiso. Faahfaahin dheeraad ah ..
Nusa ducada Beach
Nusa ducada Bali
Nusa ducada dalxiis jiidashada waa meel aad u fiican oo dadka dalxiisayaasha ah, iyadoo xeebaha ay ciid cad, 5 hotels xiddiga Jilib xeebta this. Xeebta Nusa ducada waa in la sii wado xeebta Sanur ah, soo jiidashada watersport sidoo kale halkan laga samayn karo.
Nusa ducada waa xeebta ah oo ku qalabeysan yahay dhamaystiran goobaha dalxiiska yag. Hotels Shan-star waxaa jira dad badan halkan, sidoo kale ka ciyaari isboortiga biyaha sida kalluunka ka caagan, doon muuska, badda Walker ayaa sidoo kale halkan laga helo. Waayo, kuwa idinka mid ah oo raadinaya fasax ah la goobaha buuxa oo aan ahayn ka walaacsan qiimaha, halkaas weeye meesha aad joogi midig.
Xeebta Kuta ayaa hirarka in ay xigsanayaan surfers. Kuta ma ay xasilli fiidkii, music live, karaoke, iwm, dukaamo iyo dukaamo tahay damacsan wadada ee Kuta, inta badan iibinta knick-knacks ama waxyaabaha farsamada isticmaalo. Waxa kale oo jira hotel-ka ah halkan, ugu caansan; Hard Rock Beach Club.
Xeebta Kuta waa xeebta ninkii dhallinyarada ahaa, nolosha tagaa on 24 saacadood meeshan. Xaqa jidka ag Kuta yihiin wadada Legian, halkan waxaa ku yaal dukaamo dhar badan, diskotigyada iyo makhaayadaha, waxa uu ahaa mid aad u buuq badan oo iidaya. Kuwa jecel adeeganayay xaq geeska jiro shopping ah Kuta Kuta Square.
Jimbaran xeebta Bali
Xeebta Jimbaran oo caan ku maqaayad cuntada badda sunsetnya ah muuqaal qurux badan. Xeebta Jimbaran booqan waa galabtii ilaa fiidkii, sababtoo ah waa hawlaha ugu muhiimsan ee dalxiiska dhici wakhtigaas. Ugu Jimbaran Beach sidoo kale waxa aad cuni kartaa caadiga cusub cuntada badda. Faahfaahin dheeraad ah ..
Xeebta Jimbaran waa jaceyl, aad adiga kugu haboon adiga iyo wehelkaaga ama qoyska fuliyaan casho daawanayay muuqaal qorrax iyo xeebta ciinwaanka ay nalalka shumac iyo qoryihii. Waa in aad meeshan ma seegi markii ay booqaneysay Bali.
Taallada GWK (Garuda Wisnu Kencana)
GWK taalada Bali
Balaayiin mashruucan Rupiah laga heli karaa Ungasan, ee buuraha leh oo reer Jimbaran. Taalada Garuda Kencana la sameeyey ay artist asalka Nyoman Bali Nuarta, iyadoo howlgalka ka mid ah taas oo ka dhigaysa in ay 8 yaabka leh ee dunida iyo 2aad ee Indonesia. Mid ka mid ah qaab ah in laga arki karaa oo waa Kecak ah. Faahfaahin dheeraad ah ..
Waa mashruuc a half-dhammeeyayna ay ujeedadoodu tahay inay sameeyaan taallo in size waa mid aad u ballaaran, laga yaabee sida uu taalada xorriyadda Indonesia. Gacaliye mashruucan u muuqataa hakad dhexe ee wadada.
Xeebta Pandavas waa meel cusub dalxiis jasiiradda of Bali, xeebaha qarsoon oo ay horay u ahaayeen oo kaliya tuulada inta hirku soo saara dhab badbaadin qurux dabiici ah ka taagto, iyadoo hawlaha ee jasiiradda dalxiiska Bali ah. Faahfaahin dheeraad ah ..
Macbudka Tani waxay u taagan tahay meesha ugu sarreysa ku koonfureed ee jasiiradda shacaab. Muuqaal qurxoon ee leh badweynta badda iyo qorrax ka dhamaadka xigtaa ah. Ugu qoob ka Uluwatu Kecak waxaa sidoo kale lagu sameeyaa habeen kasta. Qorrax Kombiasi iyo qoob ka Kecak gasho kuula dhaqmo lanooga aan la ilaawi karin.
Ka taxaddar alaabtaada sida muraayadaha, shandadaha iyo kale, la fageeyo karenabinatang / daayeer tiro badan yihiin meeshan inta badan Jaahiliinta mood bencuri ka soo booqanaya in ay toy ah. Waxaad sidoo kale u leeyihiin in ay ka taxadartaa sababtoo ah Uluwatu Pura ku yaal ee soo socota si ay u yaamayska.
Batubulan waa Barong ah. Waxaa jira qiyaastii 5 meelo goobta diyaar-garowga Barong Batubulan. Barong sokow, tuulada sidoo kale waa meel qaab farshaxan kale Balinese sida qoob ka Kecak iyo Legong.
Batubulan dhab ahaantii waa tuulo loo dalxiis ku yaal Regency Gianyar ah. Of Denpasar, meeshan waxaa lagu tagi karaa baabuur-wadidda qiyaas ahaan 15 daqiiqo, Iyadoo ka Kuta iyo berjelanan Legian qaadanayaa ilaa 45 daqiiqadood.
Bandhigyada Barong iyo Legong sida caadiga ah la qabtaa maalin kasta laga bilaabo 9:30 am, halka u Kecak show agagaarka bilaabo 18:30. Batubulan hadda waa mid ka mid ah xarumaha waxbarashada iyo ilaalinta ee farshaxanka Balinese, waxaa astaan ​​u samaynta dhowr dugsi tahay taasoo keentay, in tuulada sidoo kale waxaa jira dad badan oo farsamada gacanta aad u khaas ah caadiga ah ee Resort Island ee Bali ka.
Tani waa suuqa dhaqameed iibinta kala duwan ee farsamada gacanta iyo qadiin ah. Suuqa dhaqanka waxa uu ku yaalaa Regency Gianyar iyo aad u caanka ah ee Bali ama ka baxsan Bali. Alaabadaa ayaa waxaa lagu gadaa qaab funaanado dharka, funaanado, sarongs xeebta daabacay sawir tahay Balinese, farshaxanka iyo farsamada gacanta alaabta.
Suuqa Sukawati waa qiyaastii 18 km u jirta magaalada ka mid ah Denpasar oo lagu tagi karaa ilaa 30 daqiiqo. Suuqa Sukawati yahay suuqa dhaqameed halkaas oo qiimaha gorgortan waa wax caadi ah, isticmaalka AWOODA benregosiasi aad si aad u hesho qadiin ugu fiican ee Bali qiimo raqiis ah.
Batur gudubno views ka Kintamani Bali
Jiidashada dalxiiska leh muuqaal qurux badan, u gudubno, Batur Penelokan iyo Batur buurta muuqaal. In Kintamani sida iyagoo dusha sare ee buurta la views hoos qaab u gudubno Batur. In dhow waxaa cunista guryaha aad ku raaxaysan cuntada oo arkaya indhaha ka.
Besakih waa macbudka ugu weyn Hindu jasiiradda of Bali. Macbudka Tani waxaa la dhisay iyada oo aad u weyn ay caabudaan si cibaadada Brahma Vishnu Shiva. Macbudka waxaa sidoo kale inta badan loo isticmaalaa kuwaas oo bar bilow u jiirtii Buur Agung by dalxiisayaal.
Nasiib darro, Pura Besakih weyn, qurux badan oo bilicsan oo ay buuxiyeen dadka oo sheegtay inuu yahay hage safar si aad u weydiiso lacag se delish. Dalxiisayaasha maxalliga ah iyo kuwa shisheeye oo farabadan ayaa lagu niyad adeegga iyo ammaanka ee gurigan taal.
Godka oy Tani waxay mar ahaa qaribaadii meel. Banaanka jiro a taallo goobta Ganeca Goa iyo dhaqidda tuuladu foomka of Roob wali la isticmaalo maanta.
Pura Tanah Luudh Bali
Pura Tanah Luudh waa kuwo macbudyo dhaca caanka ah ee Bali iyo u muuqataa in ay noqon icon ah ee jasiiradda Bali. Aqonsado ee Macbudkan waxa uu ku yaalaa bartamaha badda, in markii berkeddii weysada ahayd waxaa hir sare aad lama soo dhawaaday, laakiin markii hir hoose aad uga gudbi karaan, oo wuxuu arkay mid keunikanya in Macbudkan waxaa dhawray by laba mas madow iyo caddaan ah in looks maalin kasta weheliyay pemangkunya.
Caan ku Taman Ayun macbudka ku hareereysan balli in loo isticmaalo si ay u duubaan macbudka by Hablihii la dooni yar. Laakiin hadda loo adeegsado kalluumaysiga balli.
The xeebta bacaadka cad u noqday caan sidoo kale ah xeebta Kuta ayaa loo arko mid aad u buuq badan iyo wasakh ah. Candi Dasa waxa uu ku yaalaa bari ee jasiiradda Bali.
Dahab iyo lacag xarunta farsamada A jasiiradda of Bali. Halkan waxa aad ka arki kartaa habka samaynta lacag iyo temtu keliya si toos ah ka iibsan kartaa.
Run ahaantii waxaa jira jiidashada iyo dhibcood oo xiiso jasiiradda of Bali aad u badan, sida la filayo wax walba ee Bali waa soo jiidashada ah dadka dalxiisayaasha ah, sababta oo ah shaqsiyad dhaqanka iyo muuqaalka uu yahay mid aad u qurux badan. Dalxiiska ee Bali
Run ahaantii waxaa jira jiidashada iyo dhibcood oo xiiso jasiiradda of Bali aad u badan, sida la filayo wax walba ee Bali waa soo jiidashada ah dadka dalxiisayaasha ah, sababta oo ah shaqsiyad dhaqanka iyo muuqaalka uu yahay mid aad u qurux badan.
Dalxiiska Raja Ampat, Papua Travel intooda badan ku waageeni
2 Jun 20141 Comments
Safar Raja Ampat
Melda by Anastasia
Raja Ampat yihiin meelo dalxiiska ee Papua, kuwaas oo dunida oo dhan uu leeyahay. Raja Ampat warkiisiina wuxuu gaadhay mid ka mid ah dalal safarka ugu soo jiidashada badan waa la diiwaan galiyay ee dokumeenti ah oo cinwaankeedu ahaa "Edis Jannada 3" inay Ciyaar ee Switzerland. Documentary uu sameeyay avant Ciyaar ka sara quruxda quuska dabiiciga ah ee Raja Ampat ee Papua in loo gudbiyo sida Amazon ah ee Badaha Adduunka. Naaneesta ayaa la qaado, maxaa yeelay booska uu ka Raja Ampat adduunka dhexe ee saddexagalka shacaab. Raja Ampat waxaa ka mid ah dhulka ee West Papua waa koox ka mid ah jasiiradaha la 610 jasiiradood faafinta, laakiin kaliya 35 jasiiradaha ay dagan yihiin dadka deegaanka.
Maskaxda ku hay in 75% ka mid ah noocyada kalluunka ee adduunka waxa uu ku yaalaa biyihii Raja Ampat. Ocean ee Raja Ampat waa ecosystem dabiici ah in weli kelesetariannya soo jeedaan ilaa hadda. Qiimaha sare ee dabeecadda istiraatiijiga ah ee badda ee Papua keentay in ay u safraan Raja Ampat ee Papua waxaa ilaaliya sharciyada Indonesia.
Tani waa si looga hortago burbur ku lafaguro badda Sharciga keliya u eryan ganacsi faa'iido. Ma aha sabab la'aan! Raja Ampat Dalxiiska ayaa noqday diiradda safarka adduunka waqtigan xaadirka ah.
Ecosystem safar quuska Raja Ampat
Dalxiiska Raja Ampat ee Papua waxay bixisaa dhowr ah oo soo jiita in ay tahay in dalabka ay dalxiisayaasha shihseeye gaar ahaan, kuwaas oo lagu boodo. Hawlaha Quusitaanka (quusidda quuska) iyo Maalqabeenada ee Raja Ampat ku tusi doonaa quruxda dunida quuska ee Raja Ampat ee Papua waa in sidaas enchanting, iyadoo noocyada kala duwan ee Qoryaale kalluunka iyo shacaab in si dabiici ah ku nool yihiin. Quusitaanka ee Raja Ampat idin tusin doonaa noocyo kala duwan oo noocyada kala duwan ee kalluunka in xitaa aanad weligaa yaqaan ka hor. Xusuusnow, 75% ka mid ah noocyada aduunka ee kalluunka ku jira Raja Ampat. Miyaad aragtay rays Manta? The stingray jirka width xitaa gaadho 2 m.
Hawlaha quuso, sidoo kale eeg qodobka ah in baadhayaa quusidda Raja Ampat Island Wayag.
Ugu yaraan waxaa jira 1500 nooc oo kalluun, 537 nooc oo shacaab iyo 699 invertebrates in waxa laga heli karaa adduunka quuska ee Raja Ampat. Wixii quuso, waxaad la socon doona khubaro iyo isticmaalka qalabka dhamaanayso. Haddii aad weligaa quusidda sameeyo xeebaha kale, markaas waxaad ahaan doontaa si wada yaabeen quruxda quuska ee Raja Ampat Papua. Qoryaale Coral ku nool yihiin uu noqonayaa a kumanaan ilaha cuntada noocyada kalluunka iyo xayawaanka kale ee badda. Lafaguro waa mid aad u dabiiciga ah iyo si la dhalaalayay ka dhigaya Raja Ampat loogu magac daray Amazon World Ocean.
Safar ay caalamka quuska Raja Ampat
Dadka qaar xuso dalxiis u Raja Ampat ee Papua waa Jannada dalxiis qarsoon leedahay Indonesia ah. Dalxiiska Raja Ampat loo caleemo karaa sida soo jiidashada dabiiciga ah ee quuska ugu xiiso leedahay Indonesia. Waa kuwee kula tartami karo quruxda dabiiciga ah quuska karaa oo keliya ku safraan Sabang Weh Island, Aceh. Haddii Ampat Raja yihiin meelo dalxiiska ee qaybta bari ee Indonesia, ka dibna u safri Sabang Weh Island waa in qaybta ugu galbeed ee Indonesia.
Si aad u ogaato Pulau Weh, sidoo kale eeg maqaalka oo sheegaya in safarka Sabang Pulau Weh Aceh.
Waxa xiiso leh, labada meeloodba hawlaha uu soo tuuray ciyaaryahanka ay ku jirto ugu soo jiidashada badan adduunka uun helay dareenka weyn ee dalxiisayaasha shihseeye. Xiisaha dadka ajnabiga ah iyo tirada booqashooyin in dhaqankan cusub ee sii kordheysa ka dib markii dhigaysa labada bad Tours Indonesia waxa uu noqday in wareegyada ee caalamiga ah si loo jecel yahay. Indeed, safarka ah dad gudaha in uu lumo in badda in ay soo booqdaan meelo dalxiiska ah.
Waynayn, factor kharashka waa sababta ugu weyn ee in ka dhigay imaanshiyihii dalxiiska maxalliga ah in ay meelo dalxiiska Raja Ampat Papua weli waa yar ah. Xaaladaha kaabayaasha Papua ee ma aha ku filan iyo kharashka gaadiidka si / ka Papua dhibic oo xiiso in Papua ayaa booqday by dalxiisayaal Indonesia. Aan xuso ku saabsan kharashka hoyga iyo logistics in la gashay inta lagu guda jiro ku riyaaqayaa safar ee Raja Ampat.
Si ka duwan dalxiisayaasha shisheeye oo ay leeyihiin heer sare dakhliga badan shacabka Indonesia, a xaaladaha dhaqaale fiican in u saamaxaya in ay ku raaxaystaan ​​quusidda sida mid ka mid ah jiidashada ee ugu caansan Raja Ampat. Waxaa sidaas oo kale arkay goobta dalxiiska ee Sabang Pulau Weh Aceh ah. Heerka dalxiiskooda shisheeye ka badan dalxiisayaasha maxalliga ah.
Mid kasta oo soo jiidashada Raja Ampat?
Quusitaanka iyo snorkeling waa mid ka mid ah dhaqdhaqaaqyada dalxiiska ee Raja Ampat ugu caansan. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad ogaataa in dhibco dalxiiska ee Papua sidoo kale kaynta cufan, kooxdu waxaa ka mid ah midabo shamiindo, noocyada kala duwan ee dhirta dhif ah, iyo sidoo kale cirkuna buulal bay qubo badda ee xeebta.
Dalxiisayaashu intooda badan isticmaalaysa doonaa Raja Ampat sababta oo ah indhaha waxay leeyihiin isticmaalo badweynta waa arrin adag. Qaar ka mid ah jasiiradaha in Ampat Raja waa jasiirada ugu soo booqday Wayag, Waiwo Island, Coral Island, Gam Islands, iyo jasiiradda Arborek. Haddii aad rabto inaad aragto haadka janno in noqday duur-joogta u gaar ah Papua, waxaad booqan kartaa Gam jasiiradaha. Waxaa jira 4 nooc oo ah haadda janno ku nool Islands Gam ah, shimbir cas Jannada, janno weyn, janno yar, iyo Jannada kala jabeen rattan.
Coral Island, mid ka mid ah jiidashada ugu dalxiis Raja Ampat
Haddii aad taagantahay fuulid dhagax weyn, u tag Coral Island. Jasiirada waxa aad fuuli doonaa dhagaxa weyn on dalcadaha ilaa 90 darajo. Haddii si guul ah ay gaareen sareysa, waxaa laguu aragyadannadii doonaa quruxda dusha laga Raja Ampat. Marka ugu xumaa ee Reef, waxaad ka arki kartaa jasiiradda cagaaran keselurahan hareereysan biyo buluug ah.
Gaadiidka Kuwani dalxiis si Raja Ampat
Si aad u timaadid jasiiradaha Raja Ampat, meesha ugu dhow ee la gaadhi karo diyaaradaha yihiin magaalada Sorong, la fogaan ah oo ku saabsan 6 saacadood ka Jakarta. Sida caadiga ah diyaaradaha ayaa transit ku Makassar ama Manado. Airlines ayaa qorsheeyey duulimaad ay ku Sorong, iyo kuwo kale, xariirta ah Air, Garuda Indonesia, Pelita Air iyo Merpati. Next, waxaad hor mari doontaa Waisai, caasimadda Raja Ampat. Magaalada Waisai waxa uu ku yaalaa on Waigeo jasiiradda, mid ka mid ah afar jasiiradood ee ugu muhiimsan (jasiiradda weyn) ee Ampat Raja Islands. Jasiiradda A waaweyn ee Raja Ampat waa Misool Island, salawati, jasiiradda Batanta, iyo jasiiradda Waigeo.
Dalxiiska WOQOOYIGA Kalimantan
North Borneo waa gobolka ugu yar ee Indonesia, ama loo qoondeeyey sida 34aad ee gobolka by Golaha Wakiilada on October 25, 2012 under Law No. 20 ee 2012 North Borneo shan gobol maamul, kuwaas oo mid ka mid ah magaalada iyo afar gobol, laakiin aan weli ka go'an hooyada gobolka magaalada. North Kalimantan gobolka wadaagtaa dhinaca gobolada ee Sabah iyo Sarawak, East Malaysia. Gobolka North Borneo ka mid ah magaalada Tarakan, Bulungan, degmada Malinau, Nunukan, oo Tana Tidung. North Borneo leeyahay hanti ah ee dabiiciga ah u fiican. Waxaad ku raaxaysan karaan jiidashada dabiiciga ah ee buuraha, Wabiyaal, kaymaha ilaaliyo, iyo waterfalls. Gobolka North Kalimantan sidoo kale waxa uu dalxiiso oo ku taalla halkaas oo biyaha waa crystal cad muuqaal qurux badan. Waxaana jira safaro beeraha, sida shukulaatada iyo basbaas in aad ku raaxaysan karaan hawada buurta cusub. Intaa waxaa dheer in aad sidoo kale ku raaxaysan karaan tours taariikhiga ah, dhaqanka iyo dalxiiska diinta waxaa.
Protected Forest Sesayap ee Tana River Tidung
Jiidashada Dabiiciga ah halkan lagu raaxaysan karaa by Sesayap doon webiga shiraaqii. Qurux iyo xaqse dhirtu isagu imaadeen in koraan webiga waxaa lagu raaxaysan karaa. Kaynta Tani ilaaliyo waa meel ay magan galaan iyo berteduhnya xoolaha kala duwan ilaaliyo sida daayeer, haad iyo xayawaan kale. Niemooleey halleeya geedaha Perengat. Geed Perengat midho waxaa loo adeegsaday aashito ah. Kale indhaha aad u xiiso badan waa marka kalluumaystayaashii waa ka yihiin qaadaan kalluunka iyo qaadaan haley oo ay weheliyaan Sesayap ah. Sesayap webiga caanka ah sida meelaha haley soo saara.
UJEEDDO Dalxiiska White Mountain in Bulungan
Tani waa buur buur ee nuurad cad. Miyuu qurux dabiici ah la reliefs sculptured sida artist ah. White Mountain ayaa Panorama qurux badan. Waxaan ku raaxaysan karaan muuqaal cajiib ah la reliefs kor ugu kacaysay ugu sareysa. Laakiin haddii aadan jeclaan fuulitaanka dhagax weyn, waxaan kori karto jaranjarada waxaa laga heli karaa. Muuqaalka dhirta dabiiciga ah ayaa sare ee White Mountain aad u qalaad. Buurtan ugu jiro shimbiraha god. Waxaa la sheegay in bulshada deegaanka ay aaminsan yihiin in godka ku tani waa meel ay ku soo hadalqaaday / naftiisa dajinta Sultan of Bulungan. White Mountain deegaanka farshaxanka lagu soo bandhigay guriga ku stilts in goobta.
Diidayo Mountain Nature Rian ee Tana Tidung
Rian waxaa ku yaal tuulada buurta ee Safari Rian, Degmada Sasayap ah. Buur Rian uu duud yahay mid aad u ballaaran ilaaliyo. In meel la joogo ma jiro waterfalls sare iyo madarad oo cad. Buur Rian leedahay awood sidii goob dalxiis oo loogu talagalay dadka ee Indonesia ah. Buurtan ugu jirto Niagara Rian ah. Asal ahaan ka mid ah magaca Niagara Rian dhadhan waa sababtoo ah halka ay ku sugan tuulada subdistrict Rian, Sesayap, Tanah Tidung. Dhac waxaa ka dhaca dhagaxyada uga yaacday ilaa iyo calool-xumida leh. Buurta wuxuu ka kooban yahay todoba heerarka. Laakiin heerka kaliya hal iyo labo waxaa inta badan enlivened by dalxiisayaal.
INHUTANI Xannaanada ee Tana Tidung
Xanaanada INHUTANI waa meel dalxiis aan ka fogayn caasimadda Tana Tidung. Jawiga waa mid aad u qabow oo raaxo leh ka dhigaysa Xannaanada INHUTANI sida meel madadaalada guud loo isticmaalo. Xannaanada booqday INHUTANI ka dhigi kara nabad qalbiga quruxda Panorama ee.
UJEEDDO Dalxiiska Kaneecada River ee Nunukan
In badan oo River kaneecada penduduknnya beeralayda yamg shaqeeya basbaaska madow iyo shukulaatada. Goobtani waxa ay si fiican u yaqaan saare basbaas iyo shukulaatada. Waayo, kuwa xiiso Dabcan sayniska beeraha waa meel ku fiican in ay soo booqdaan.
UJEEDDO Dalxiiska Stone Lamapu in Nunukan
Stone lamapu jiidashada dalxiiska ku yaal jasiiradda of Sebatik. On jasiiradda la joogo ma jiro kala ah lua, oo markii biyaha badda waxaa loo yaqaan Stone Lumapu laba nooc dhexe. Meeshu waa soo horjeeda Island Nunukan ah.
UJEEDDO Dalxiiska Long Bawan (Krayan)
Long Bawan waa dhul buuraley ah in si toos ah xuduud la Sabah (Malaysia). Long Bawan degan Dayak Lundaye. Dayak Lundaye leeyihiin Xaflada Nyumpai Dhalashada May Semarang. Qabiilka Dayak kale oo uu leeyahay Parisanan qoob ka ciyaarka iyo Bari tuubada. Krayan caanka ah sida beer weyn gisi ah iyo sidoo kale Rice sherkadaha soo saarayaasha cusbo Dabiiciga ah.
UJEEDDO Dalxiiska Amal Beach ee magaalada Tarakan
Inkastoo booqashada Amal Beach, dareemi ka farxin doontaa marka salaamay wada dhaqdhaqaaqayeen geed oo timir ah xeebta. 11 km u jirta bartamaha magaalada xeebta Amal. Amal Beach waxaa ku yaalla tuulada Afar.
Diidayo North Borneo Taariikhda
Gaw in Bulungan Bulungan tours taariikhiga boqornimada waa mid aad u xiiso iyo dar aqoonta.
Soojiidashada: Yellow Land Beach / Reef Marine Park Tigau
Xeebaha Land Yellow
Dalxiiska xeebta Yellow waa mid aad loo jecel yahay, maxaa yeelay muuqaalka qalaad. Markaasaannu xeebta ku jiraan ciid nadiif ah oo cad, oo leh hirarka biyaha badda oo waaweyn. Biyaha badda ee Yellow Beach Land ayaa biyo cad, sababtoo ah waxa uu ku nijaasoobay by qashinka magaalooyinka. Xeebta Ciidda Yellow jasiiradda of Derawan, nooca kalluunka aad u badan. Si ay u tagaan meesha lagaala soo xidhiidhi karo ka Tanjung Selor in ay dalxiiska baabuurta afarta taayir leh ama doon oo kuwa dheereeya oo laga bilaabo webiga.
From Wikipedia Indonesia,
Location Derawan Islands, Degmada Derawan, Berau Regency, East Kalimantan
Xeebta Derawan Island
Derawan Islands waa jasiiradaha ah oo ku yaalla Berau, East Kalimantan. In jasiiradaha waxaa jira tiro ka mid ah dalxiiska nautical soo jiidasho badan, mid ka mid ah oo Parks quuska xiiso dalxiisayaasha shihseeye, gaar ahaan kala duwan heer caalami.
Derawan Islands waxay leedahay saddex degmo oo kala ah, Derawan, Maratua, Big haansadaa iyo Big haansadaa ah, Berau.
Ugu yaraan afar ka mid ah jasiiradaha caanka ah ee jasiiradaha, jasiiradda Maratua, Derawan, Sadaqada iyo Kakaban deggan qoolley oo cagaaran iyo hawksbill gelinayaa.
Juqraafi ahaan, waxaa ku yaalla Jasiiradda waqooyi ee badda biyaha degmada Berau ka kooban jasiirado dhowr ah oo Long Island Raburabu, Island Samama, Island Sadaqada, Kakaban, Island Nabuko, Maratua Island iyo Derawan Island iyo qaar ka mid ah Qoryaale sida Muaras la gubo, gubato Pinaka , gubato Buliulin, Masimbung guban oo gubato Tababinga.
Derawan Islands deegaanka xeebta oo ay jiraan dhawr jasiiradood oo yar oo aad u muhiim ah in Qoryaale shacaab, sariiraha seagrass iyo kaymaha mangrove (mangroves). Intaa waxaa dheer, noocyada badan ilaaliyo waa in Derawan Islands sida qoolleyda oo qoyan, qoolley hawksbill, nibiriyada badda, hoonbarrooyinka, Eedeymo u haysteen qumbaha, mermaids, kalluunka, barracuda iyo noocyada kale ee yar.
Derawan Islands la dalacsiiyay by Berau iyo Gobolka Kalimantan Bariga, sida mid ka mid ah dalxiiska halbowlaha ah. Dalxiisayaasha dibadda iyo deegaanka, ayaa in ka badan waxaa u safray, ma doorashada laakiin in quusin, arkaan qoolley kulaylaha, ayaa sidoo kale ku riyaaqay xeebta nadiif ah oo qurux badan. Xeebta waa nadiif ah iyo qashinka lahayn. Isgaarsiinta Derawan Islands ayaa wanaagsan, sida tusaale ahaan, waxaa hore u daboolay signal 3G.
Resort iyo Waab in Derawan Islands firidhsan yihiin xeebta, iyada oo tusaale ahaan qiimo jaban marka la barbar dhigo baro dalxiiska ee Bali iyo Lombok.
Derawan Islands ayaa loo magacaabay in uu noqdo ah UNESCO World Heritage Site 2005.
1 Jasiiradaha Derawan Islands
2 la fili karo Derawan Islands
2.1 Qoryaale Coral
2.2 kalluunka Reef
2.5 Ciidamada Kalluumaysiga
3 dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha
4 deegaanka ilaalinta la fili karo
6 links Dibadda
Islands ee Islands Derawan ah
Jasiiradaha ee Islands Derawan ku bixiyay lacag ku dhow 31 jasiiradaha iyo dhowr gubtay oo bed.
Jasiiradaha Kuwani waxaa lagu daadiyaa saddex degmo xeebeed, Derawan Degmada, sub degmada Maratua, iyo Degmada Big haansadaa-haansadaa. Size ah jasiiradaha waa kuwan:
Size ee jasiiradda kasta Derawan Islands
No. Meesha Magaca Island ee hektar (ha)
4. gawrici 230,6
11. Length 565,4
12. Wednesday-Wednesday 26.7
13. Sadaqada 15.9
21. waaweyn Sodang 6145,8
24. sheeg-tiro 25.2
29. waaweyn Kaniungan 73,3
30. Small Kaniungan 10.2
Isticmaalka dhulka jasiiradda by dadka deegaanka ayaa waxaa ku koobnayn kalaab. Intaa waxaa dheer, dalkii reer jasiiradda Derawan Islands ayaa weli ku jira qaab kaymaha mangrove, xoortay, kaynta shamiindo iyo Dhirta on Maratua qumbaha jasiiradda.
Fili karo Derawan Islands
Qoryaale Coral in Islands Derawan waa baahsan qabtay oo gasiiraddii joogtay oo dhan iyo gubato in Derawan Islands. Hirst lugood gasiiradaha waxaa ka mid ah Long Island gubato, guban Masimbung, Buliulin gubato, guban Pinaka, guban oo gubato Tababinga Muaras.
Nooca Reef Derawan Islands ka kooban yahay fringing, Qoryaale ooday iyo bed. Atoll Tani ayaa loo sameeyay galay jasiiradda iyo sameeyay badda iyo harooyinka ayaa ah. "Manta CECAFA Survey 2003" muujinaysaa cover celcelis ahaan Qoryaale oo raamood ee Long Island waa 24,25% in ay 34,88 u shacaab adag oo nolosha jabalo. Qoryaale Coral in Derawan Island leeyahay dabool shacaab celcelis ahaan shacaab adag 17,41% iyo 27,78% cover shacaab nool. Iyada oo tirada noocyada 460 470 si ay u soo jeedisay in ay tani noqon xoolo ah oo labaad noole oo kaliya in ay Ampat Raja Islands.
Meesha ugu weyn ee jabalo shacaab:
Dhererka qaybta galbeed ee jasiirada (tubada iyo channel)
Muaras kala duwan sare oo raamood, qiimaha caafimaad iyo bilicsanaanta shacaab
Malalungun shacaab, kala duwanaanta sare leh qaab adag oo kala duwan oo ka mid ah degaanada
Big Habitat shacaab hodan.
Sahan kalluunka Reef ee 2003 waxay muujisay in gasiiraddaas tan soo saarta 832 oo noocyada. Waxaa intaa dheer, waxaa la qiyaasayaa inay jiraan ugu yaraan 1.051 noocyada biyaha ku Berau Gobes noocyada badan (Gobiidae), Wrasses (Labridae), iyo Damselfishes (Pomacentridae).
Seagrass helay kala firdhiyey oo dhan jasiiradaha Derawan qaba xaaladaha kala duwan leh meel celcelis ahaan daboolka ka yar 10% ilaa 80%. Lafaguro Kuwaas oo dabiici ah oo dhaqaale ahaan waa mid aad u muhiim ah, laakiin jiritaankeeda halis by qas iyo hawlaha aadanaha sida xaadhista baaxad weyn oo ay kaynta, dababka kaynta, naaxinta badda, kimikada kala, propellers doon, iyo kuwo kale. Derawan Island waxaa jira laba nooc oo xukuma cawska badda iyo Thalasia hemprichii Halophila ovalis iyo sidoo kale afar kale oo noocyada seagrass helay agagaarka gasiiradaha Halodule uninervis, rotundata Cyamodocea, isoetifolium Syringodium, iyo Halodule pinifolia.
Gobolka Berau Delta ee bulshada mangrove dhaqan ahaan looga faa'iideysan sidii il-nololeed ee qoyska, sida kalluunka, haley, iyo haysteen doontooda. In tobankii sanno ee ugu danbeysay, ilaalinta mangrove in Berau badan si balliyada haley iyo kalluunka iyadoo heerka si degdeg ah u xaadhista dhulka. Nipah (fructican Nypa) xukumaan ka kooban noocyada mangrove in Berau Delta. Natiijooyinka daraasadda qiimeynta dhaqaalaha iyo ilaalinta ee mangrove muujinaysaa in qiimaha dhaqaale ee kaymaha mangrove bixiyaan faa'iidooyin toos gaadhaya US $ 295,78 / ha / sanno, faa'iidooyinka aan toos ahayn US $ 726,26 / ha / sanno, faa'iidada doorashada US $ 358,46 / ha / sanno, faa'iidada saafiga ah US $ 1,395.50 / ha / sanno.
Dhaqdhaqaaqa kallumeysiga ee Derawan Degmada iyo Maratua ka mid ah kalluumeysiga badda, ukunta qubada wax kaqabashada, iyo naaxinta xayawaan. Ku dhaco Kalluumaysiga iyo khayraadka badda Derawan Islands degmada geysato dakhliga degmada Berau oo ka mid ah shan degmo in ay leeyihiin hawlaha qaadista kalluumeysiga badda ugu weyn.
Tani waxqabad ee 2001 lagu tiriyaa RP. 37,907,680.00. Number of maraakiibta kalluumaysiga ee Derawan Degmada iyo Maratua 2001 sida ugu badan 426 ay tirada doonyaha aan matoorrada sida ugu badan 256 unug. Qalabka kalluumaysiga ee Derawan Degmada iyo Maratua waa payang (bac oo shabagyadoodii) 74 cutub, Sein kiishad (reebin kiishad) 14 halbeeg, Gill shabaqa 282 unug, oo shabagyadoodii wiishka 30 cutub, Ushaada 139 unug, kaydiya 66 cutub oo hab oo lagu soo ururiyo 13 halbeeg.
Hawlaha Kaluumaysiga waxa ay yihiin lafdhabarta howlaha in Maratua iyo Derawan sababtoo ah badanyihin dadka kalluumaysatada. Kalluumaysiga faa'iideysan ay Maratua iyo Derawan waa noccyo iyo kalluunka jabalo. Laga iibiyo kalluunka waxaa guud ahaan lagu iibiyo Derawan iyo Maratua Island, Cape Redeb, Surabaya iyo dhowr magaalo oo ka baxsan gobolka oo maray ururinta waa wax weyn oo, inta badan la geliyo si dhoofinta kuwaas oo markaas u iibin jireen inay macaamiisha dibadda.
Goobta daryeel la fili karo
In Qorshaha astaanta Degmada Berau ayaa la qorsheeyey deegaanka ilaalinta ee jasiiradaha yaryar ee Islands Derawan ah. Ilaalinta la fili karo ee noole waxaa loo arkaa in kuwaas oo ka mid ah jasiiradaha duur-gud kale, iyo meelo kale oo muhiim ah. Ka sokow isagoo qaar ka mid ah la lafaguro kulaylaha oo ka kooban Qoryaale shacaab, seagrass, oo la lafaguro mangrove, Derawan Islands waxa kale oo uu leeyahay noocyada la ilaaliyo oo kala.
Masaaridu ay ku jiraan haysteen doontooda qumbaha (Birgus latro), nibiriyada badda, hoonbarrooyinka (Delphinus), qubada cagaaran (mydas Chelonia), hawksbill (Erethmochelys fimbriata), iyo dugong (Dugong dugon). Haysteen doontooda qumbaha waxaa laga heli karaa Kakaban iyo Maratua. Pope waxaa laga heli karaa agagaarka jasiiradda Maratua xilli gaar ah, halka hoonbarrooyinka agagaarka Semama jasiiradda, Sadaqada, Kakaban, Maratua, iyo Gosong Muaras. Qoolley waxaa laga heli karaa Long Island, Derawan, Semama, Sadaqada iyo Maratua iyo Dugong in Long Island iyo Semama. Noocyada kale oo gaar ah waa Rays ee Manta (birostris Manta), ku yaal Island Sadaqada iyo Pigmy Seahorse ee P
Posted by needsjobslowongankerja at 11:41 AM